» नेपाल आईडलमा कसको जोडी हिट ? भाग १
नेपाल आईडलमा कसको जोडी हिट ? भाग १
२३ माघ २०७६, बिहीबार १७:०८
मकवानपुर, २३ माघ । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो नेपाल आईडल सिजन ३ मा उत्कृष्ट ११ प्रतियोगीहरु छानिएका छन् । उत्कृष्ट ११ छानिनुअघि गाला राउण्डको दोस्रो हप्ताको पहिलो प्रस्तुतिमा १२ प्रतियोगीहरुलई जोडी बनाएर प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो । युगल प्रस्तुतिमा जोडी बनेका प्रतियोगीहरुलाई दर्शकहरुले पनि निकै रुचाएर कमेन्ट गरेका थिए । यस भिडियो सामग्रीकाृे पहिलो भागमा ३ वटा जोडीहरुमा कसको जोडी कस्तो रह्यो अनि को कति हिट भन्ने बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । तपाईलाई पनि कुनै जोडी राम्रो लागेको भए भिडियोमा कमेन्ट गर्नसक्नुहुन्छ ।
बिहिबारको प्रस्तुतिमा पहिलो जोडीका रुपमा सिजन ३ का एकमात्र गोल्डेन माईक विजेता मेघा श्रेष्ठ र नेपाल आईडलको स्टेजमा तहल्का मच्चाउन सफल मिग्मा लामाले प्रस्तुति दिएका थिए । उनीहरुले उक्त प्रस्तुतिबाट ‘कोकाकोला अपलिफ्टिङ पर्फोमेन्स अफ द डे’ अवार्ड समेत प्राप्त गरेका छन् । बिहिबार युगल प्रस्तुतिमा यी दुई प्रतियोगीहरुको गायन प्रस्तुति उत्कृष्ट भएसँगै उनीहरुले उक्त अवार्ड जितेका हुन् । अवार्ड जितेसँगै मेघा र मिग्माले नगद २० हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् । बिहिबार मेघा र मिग्माले कालिप्रसाद बासकोटाको आवाजमा रहेको ‘हेरिहन देऊ मलाई’ बोलको गीतमा उत्कृष्ट प्रस्तुति दिएका थिए । उनीहरुको रेस्पेक्ट प्रस्तुतिमा तिनै जना निर्णायक, विशेष अतिथि गायिका मेलन नेवारका साथै सहभागी र दर्शकहरुले स्टाण्डिङ अवेशन दिएका थिए । गीतका गायक, गीतकार तथा निर्णायक कालिप्रसाद बासकोटाले उनीहरुको भर्सनलाई उत्कृष्ट भर्सनको संज्ञा दिए । निर्णायकहरुले दुबै प्रतियोगीहरुको निकै तारिफ गरे । मेघा र मिग्मा दुबै जना उत्कृष्ट ११ को लागि छनौट भएका छन् । हेर्नुहोस् भिडियो–
हेटौँडा निवासी मिग्मा लामाले पियानो राउण्डमा बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द उईक अवार्ड समेत जितेकी थिईन् । मिग्माको भोटिङ कोड एनआई ०६ हो । उनलाई भोट गर्नका लागि नेपालबाट उनको भोटिङ कोड लेखेर एनटिसी, स्मार्ट सेल र एनसेलबाट ३७००० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । त्यस्तै १६६६७७०६ डायल गरेर उनलाई भोट गर्न सकिन्छ भने भारतबाट भोडाफोन मार्फत ५३०१० मा, कतारबाट ओरेडुमार्फत ९२३०० मा र मलेसियाबाट अल टेलिकोसमार्फत ३३३१० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । उनलाई रेस्पेक्ट एण्ड राईज एपबाट तपाईले चाहानुभएको जति रकमको प्याकेज भोट एकैपटक गर्न सक्नुहुन्छ । नेपाल आईडलको स्टेजमा रक स्टारको छवि बनाएकी मिग्मा लामाले आफुलाई मेलोडी क्विनका रुपमा समेत प्रस्तुत गरेकी छिन् । २१ वर्षीया मिग्मा स्केचेच ब्याण्डमा आवद्ध छिन् । साँगितिक आकासमा चम्कँदै गरेकी मिङ्माले केही गायन प्रतियोगिताहरुमा भाग लिनुका साथै केही कभर तथा ओरिजिनल गीतहरु समेत गाएकी छिन् । स्कुल पढ्दाको समयदेखि नै विद्यालयस्तरमा हुने गायन प्रतियोगिता तथा हेटौँडाका विभिन्न कन्सर्टहरुमा समेत सक्रिय सहभागी भएकी मिग्माले औपचारिक रुपमा ३ महिनाको मात्र संगीतको कोर्ष गरेकी छिन् । हाल स्नातक अध्ययनरत मिग्मा कुनै समय विभिन्न लाईभ कार्यक्रमहरुमा समेत सहभागी हुन्थिन् । उनले भ्वाईस अफ नेपालको पहिलो सिजनमा पनि सहभागिता जनाएकी थिईन् । सँगीतलाई आत्माविश्वास बढाउने मेडिटेसनको रुपमा परिभाषित गर्ने मिग्माले निरन्तर संगीतको शिखरतर्फ आफ्नो पाईला बढाउँदैछिन् ।
बिहिबारको दोस्रो जोडीका रुपमा झापाकी रचना रिमाल र कैलालीका कमल शोबले प्रस्तुति दिएका थिए । उनीहरुले उदित नारायण झा र दिपा नारायण झाको आवाजमा रहेको ‘फुलपाती भाकेर’ बोलको गीत प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरुको प्रस्तुतिमा सबै निर्णायकहरुले सकरात्मक कमेन्ट गरेका छन् । कमल र रचना दुबै जना उत्कृष्ट ११ मा प्रवेश गरिसकेका छन् । झापाको भद्रपुर निवासी रचना रिमाल १७ वर्षकी छिन् । कक्षा ११ मा अध्ययनरत रचनाले सानै उमेरमा संघर्ष गर्न सिकेकी छिन् । मिठो चटपटे बनाउने रचनालाई भद्रपुरमा धेरैले चटपटेवाली भनेर चिन्छन् । सानो छँदा मन्दिरमा भजन गाउने गरेकी रचनाले विद्यालयमा हुने विभिन्न कार्यक्रममा भाग लिँदै गीत गाउन थालेकी हुन् । कक्षा ९ मा अध्ययन गर्दाको समयमा संगीतको कक्षामा भर्ना भए पनि उनले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिनन् । उनको संगीत सिकाईको समय ४ महिनामा मात्र सिमित भयो । संगीतमै करियर बनाउने योजनामा रहेकी रचनालाई संगीतमा लगाव भएका कारण उनका आमाबुवाले समेत साथ दिएका छन् । सबैले चटपटेवाली भनेर चिनेता पनि उनी आफ्नै नामले चिनिन चाहान्छिन् ।रचनाको भोटिङ कोड एनआई १० हो । उनलाई भोट गर्नका लागि नेपालबाट उनको भोटिङ कोड लेखेर एनटिसी, स्मार्ट सेल र एनसेलबाट ३७००० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । त्यस्तै १६६६७७१० डायल गरेर उनलाई भोट गर्न सकिन्छ भने भारतबाट भोडाफोन मार्फत ५३०१० मा, कतारबाट ओरेडुमार्फत ९२३०० र मलेसियाबाट अल टेलिकोसमार्फत ३३३१० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । उनलाई रेस्पेक्ट एण्ड राईज एपबाट तपाईले चाहानुभएको जति रकमको प्याकेज भोट एकैपटक गर्न सक्नुहुन्छ ।
नेपाल आईडल सिजन ३ मा दमदार प्रस्तुति दिएर चर्चामा आएका कमल कैलाली निवासी हुन् । उनी २० वर्षका छन् । सानैदेखि संगीतमा रुचि राख्ने कमलले विद्यालयमा अरुले गाएको देख्दा त्यसैगरी गाउने प्रयास गर्थे । घरमा फुपु र दिदीहरुको गाउने कला नक्कल गर्थे । साथीहरुले स्वर राम्रो रहेको भन्दै उनलाई हौसला दिन्थेँ । गाउँमा संगीत सिक्न राम्रो ठाउँ नभएका कारण उनले एक जना शिक्षकसँग गीतार बजाउन सिके । औपचारिक रुपमा भोकल क्लास नलिएका कमलले कुनै समय केही साथीहरुसँग मिलेर साँगितिक प्रस्तुति दिन्थे । एकप्रकारले त्यो उनीहरुको ब्याण्ड नै बनेको थियो । उनी ब्याण्डसँगै प्रस्तुति दिन्थे । ब्याण्डमा नै उनले सँगीत सिकेका हुन् । ब्याण्डमा रिदम गितारिष्ट र भोकलिष्ट भएर काम गरेका कमल संगीतलाई निकै महत्व दिन्छन् । पहिलो पटकको संगीतको प्रतियोगितामै उनले यस्तो सफलता पाएका हुन् । उनले नेपालगञ्ज अडिसनबाट बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द डे अवार्ड पनि जितेका थिए । कमलको भोटिङ कोड एनआई ०१ हो । उनलाई भोट गर्नका लागि नेपालबाट उनको भोटिङ कोड लेखेर एनटिसी, स्मार्ट सेल र एनसेलबाट ३७००० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । त्यस्तै १६६६७७०१ डायल गरेर उनलाई भोट गर्न सकिन्छ भने भारतबाट भोडाफोन मार्फत ५३०१० मा, कतारबाट ओरेडुमार्फत ९२३०० र मलेसियाबाट अल टेलिकोसमार्फत ३३३१० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । उनलाई रेस्पेक्ट एण्ड राईज एपबाट तपाईले चाहानुभएको जति रकमको प्याकेज भोट एकैपटक गर्न सक्नुहुन्छ ।
बिहिबारको तेस्रो जोडीका रुपमा बर्दिवासका किरणकुमार भुजेल र मकवानपुरकी स्वस्तिका ढकालले प्रस्तुति दिएका थिए । कालिप्रसाद बासकोटा र अस्मिता अधिकारीको आवाजमा रहेको ‘साली मन पर्यो’ बोलको गीत गाएका किरण र स्वस्तिकाको प्रस्तुतिलाई निर्णायकहरुले सकरात्मक कमेन्ट दिएका थिए । उनीहरुमध्ये किरण उत्कृष्ट ११ मा प्रवेश गरेका छन् भने स्वस्तिकाको नेपाल आईडल यात्रा उत्कृष्ट १२ बाट टुंगिएको छ । नेपाल आईडलको स्टेजमा भर्सटाईल सिंगरका रुपमा ख्याति कमाएका किरणले शुक्रबार ‘कोकाकोला अफलिफ्टिङ पर्फोमेन्स अफ द डे’ अवार्ड पनि जितेका छन् । २६ वर्षीय किरण महोत्तरीको बर्दिवास निवासी हुन् । अडिसन राउण्डदेखि नै चर्चामा रहेका किरणले स्कुले जिवनदेखि नै गाउन सुरु गरेका हुन् । कक्षा ६ मा अध्ययन गर्दाको समयमा नै उनले गीत गाएको अनुभव छ । दाईले गाएको देखेर दाईकै नक्कल गर्दै गीत गाउन थालेका किरणले एसएलसी सकाएपछि वि.सं. २०६५ सालमा काठमाडौँ प्रवेश गरे । काठमाडौँमा आएर सँगीत विषय अध्ययन गरेका किरणले ललितकला क्याम्पसबाट संगितको औपचारिक शिक्षा लिएका छन् । संगितमा नै स्नातक गरेका किरणले वि.सं. २०६५ सालतिर पहिलो पटक आफ्नै गीत निकालेका थिए । ‘नरनारीबाट प्रेमको’ बोलको पहिलो गीत सार्वजनिक गरेपश्चात किरणले ब्याण्डहरुसँगको सहकार्यका गीगहरु समेत गर्दै आएका छन् । ५० वटाभन्दा बढी गीत सार्वजनिक गरिसकेका किरण अहिले जे ब्याण्डमा आवद्ध छन् ।
किरणको भोटिङ कोड एनआई ०३ हो । उनलाई भोट गर्नका लागि नेपालबाट उनको भोटिङ कोड लेखेर एनटिसी, स्मार्ट सेल र एनसेलबाट ३७००० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । त्यस्तै १६६६७७०३ डायल गरेर उनलाई भोट गर्न सकिन्छ भने भारतबाट भोडाफोन मार्फत ५३०१० मा, कतारबाट ओरेडुमार्फत ९२३०० मा र मलेसियाबाट अल टेलिकोसमार्फत ३३३१० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । उनलाई रेस्पेक्ट एण्ड राईज एपबाट तपाईले चाहानुभएको जति रकमको प्याकेज भोट एकैपटक गर्न सक्नुहुन्छ । नेपाल आईडलको उत्कृष्ट १२ मा पुगेकाहरुमध्ये सम्भवत सबैभन्दा बढी मिडिया कभरेज पाएकी प्रतियोगी हुन् स्वस्तिका ढकाल । उनलाई नेपाल आईडलको उपाधी दाबेदारका रुपमा समेत चर्चा गरिएको थियो । नेपाल आईडल सिजन ३ मा मेलोडियस प्रस्तुति दिएर अघि बढेकी स्वस्तिका मकवानपुरको हेटौँडा ८ कमाने निवासी हुन् । उनी यस अघि सिजन २ मा पनि उत्कृष्ट २० सम्म पुग्न सफल भएकी थिईन् । २३ वर्षीया स्वस्तिकाले सानैमा विद्यालयमा अध्ययन गर्दाको समयदेखि नै साँगितिक क्षेत्रमा आफुलाई अगाडि बढाएकी थिईन् । संगितको औपचारिक शिक्षा नलिएता पनि उनले सानैमा सिकेको बालगीतसँगै उनको संगीतको यात्रा अघि बढेको थियो । अहिलेसम्म ओरिजिनल गीत सार्वजनिक नगरेकी स्वस्तिका संगीतलाई पिडा भुलाउने थेरापीका रुपमा परिभाषित गर्छिन् ।